Amiir Philip naxdin: Caadada Ingiriiska ee ah in Duke of Edinburgh ma istaagi karto - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Amiir Philip naxdin: Caadadii Ingiriiska ee Duke of Edinburgh ma qaban karto
Amiir Philip naxdin: Caadadii Ingiriiska ee Duke of Edinburgh ma qaban karto
Prince Philip da '98 sano jiray, oo ka fariistay ganacsiga rasmiga ah ee taajka boqornimada. Wixii markaas ka dambeeyay, wuxuu ku raaxeysanayay hawlgabnimadiisa wuxuuna waqtigiisa badan ku qaatay Wood Farm ee Sandringham, Norfolk. Laakiin inkasta oo uu ku raaxeysto dhinacyo badan oo howlgabnimadiisa ah, ma taageersana hiwaayadda Ingiriiska oo keliya.
Duke of Edinburgh wuxuu ku dhashay reeraha boqortooyada Griig iyo kuwa deenishka ee 1921.
Ka dib caruurnimadii adkeyd ee ku jirtay qoyskiisa. oo laga masaafuriyey Gariiga isla markaana ay waayeen xubno badan oo qoyskiisa ah, wuxuu wax ku bartay Ingiriiska.
Labaad ayaa guursaday reine ka dibna Princess Elizabeth ee 1947.
Markuu guursaday boqoradda, wuxuu noqday muwaadin dhalasho ahaan ka soo jeeda Ingiriiska, laakiin taasi micnaheedu maahan inuu qaatay dhammaan caadooyinkiisii ​​iyo caadooyinkiisii.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Amiir Philip snub: Sidee shaqaalihiisii ​​Filibos u qaateen ninkii beerta ka shaqaynayay
Amiir Philip Shock: Maxuu Prince Prince jecleyn laakiin maxay boqoradda jeceshahay? (Sawirka: GETTY)
Boqoradda waxay fiirineysaa Amiir Charles hoos u dhigaya taajka 'poppy' ee filimka 'cenotaph'
Arrin naxdin leh oo ku saabsan Boqortooyada Ingiriiska, Duke of Edinburgh kuma raaxeysto mid ka mid ah caadooyinka ugu caansan uguna caansan Ingiriiska: shaaha. 19659004] Sida laga soo xigtay ilaha, Prince Philip kuma raaxeysanayo shaaha caadiga ah ee Ingiriiska ama nooc kale oo shaah ah.
Halkii ayaa loo sheegay inuu jecel yahay kafee madow.
Taas macnaheedu waa in qaar ka mid ah faa'iidooyinka waa weyn ee caafimaadka ay ka maqan yihiin. ka dhashay cabitaanka shaaha.
Amiir Philip naxdin: Boqoradda iyo Prince Philip waxay is guursadeen Bishii Nofembar 1947 (Sawirka: GETTY)
Sida laga soo xigtay Carrie Ruxton, oo ku takhasustay nafaqada caafimaadka guud ee King At London College, cabitaanka shaaha waxay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo weyn.
Waxay u sheegtay Salon: “Shaah cabitaanka runti way kaaga fiican yihiin cabitaanka biyaha.
Biyaha ayaa muhiimad ahaan beddelaya dareeraha.
Shaahu wuxuu beddelaa cabitaannada waxaana ku jira antioxidants. Markaa waxay leedahay laba faa iido: xitaa haddii aad ku jirtay koob shaah ah ama kafee aad u xoog badan, kaas oo ay adag tahay in la sameeyo, waxaad had iyo jeer lahaaneysaa macaash saa'id ah oo saafi ah (yac ahaan jirkaagu wuxuu sii wadaa wax ka badan inta uu ka bato].
"Intaa waxaa sii dheer, koob shaah ah ayaa ku jira foloraydh, oo u wanaagsan ilkaha."
Sidee Peter Phillips uga digay inuusan u dhowaanin walaashiis. [EXPLAINER]
Soo dejinta la yaabka leh ee Zara Tindall ee ku saabsan umusha [Aragti]
Muxuu kulanka Maalinta Xusuusta u arkaa "afartaa fajaciso" oo dhinac fadhiya [FALANQAYNTA]
Boqortooyada Midowday (UK) way aamusantahay iyadoo Amiir Charles hoggaanka u hayo wadanka geesiyaal
] Isticmaalka shaaha waa qeyb muhiim ka ah dhaqanka Ingiriiska
Marka loo eego tirooyinka dakhliga ee lagu daabacay 2015, warshadaha shaaha ee Boqortooyada Midowday waxay lahaan jirtay suuq gebi ahaanba qiime ah oo ah 450,7 milyan oo rodol oo shilin ah oo loogu talagalay alaabada shaaha madow.
Intaa waxaa dheer, 78,8 milyan oo rodol ayaa la iibiyay. miraha iyo shaaha geedaha, halka £ 46,1 £ lagu iibiyay shaaha qaaska ah.
Boqoradda ayaa la sheegay inay tahay taageere weyn oo shaah ah, laakiin Prince Philip ma jecla inuu shaah la cabbo.
Amiir Philip Shock: Amiir Philip Wuxuu inta badan waqtigiisa ku qaataa Sandringham Estate. (Sawirka: GETTY)
Royal Butler Grant Harrold waxa uu ku sheegay sedex dukumiinti oo BBC ah in Boqortooyada ay sidoo kale aad u xasaasi u tahay habka ay u diyaariso una cabto shaahkeeda.
Waxa uu intaa ku daray in inta badan ay u adeegto caano ka hor.
Wuxuu u sheegay BBC: "Waan hubaa inay boqoraddu jeceshahay Assam ama Earl Grey hab dhaqan ahaan, oo laga sameeyay caleemo shaaha oo lagu qadiyo. Koobka shaaha ee jilicsan.
Waxay kaloo adeegsan doontaa colander.
"Waxay sidoo kale tahay khuraafaad ah in xubnaha Royalty ay adeegsadaan farahooda yar si ay u cabbaan, waligeey ma arkin inay taasi dhacday mar."
Pete Doherty ayaa mar kale xabsi ku jira kadib dagaal ka dhacay wadooyinka magaalada Paris
PHOTOS. Abaalmarinada Muusikada NRJ 2019: Christina Milian, oo uur leh, waxay sameysaa dareen leh daahfurnaan sare oo ku saabsan gacanta Matt Pokora